Uhlolojikelele BlackBerry Ijika 3G — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Uhlolojikelele BlackBerry Ijika 3G
Smartphone BlackBerry Ijika 3G — Isinyathelo esilandelayo siwukushumayela in ukuthuthukiswa omunye bathengisa kusukela Research In Motion Models (RIM). Le modeli isekela Ijika 3G-ubuchwepheshe, futhi futhi inama nokuzimisela ukuze uthuthukise OS version 6 BlackBerry OS 6, naphezu kweqiniso lokuthi lokhu smartphone egijima pre BlackBerry OS 5 (Operating System version 5).
Nakuba abasebenzisi abaningi baye kwi BlackBerry Bold 9700 model, Bold 9650, Torch noma Storm, Ijika Smartphones uchungechunge zisekhona a ethengwa kakhulu "RIM" inkampani, kanye emisha zakamuva benza lokhu model azinake.
Kumele kuqashelwe ukuthi le model ayenzelwe ukuba abe phezulu fan-abasebenzisi BlackBerry, njalo abafuna babe kuphela entsha futhi eziphambili kakhulu amafoni smart, ngoba senzelwe labo abafuna a look nice at the tekusebentisa ergonomic smartphone Blackberry. Le imodeli, of course, kuhloswe ngokuyinhloko kulabo namanje usebenzisa ifoni ephathekayo abajwayelekile, kodwa ngingathanda ukuba uqale ukusebenzisa ama-ukusetshenziswa elula smartphone. Sinikeza Ukuze uthole ukubukezwa okuphelele kwalesi divayisi.
BlackBerry Ijika 3G — Imininingwane
Ubude 4,29 ye-intshi / 109 mm
Ububanzi 2.36 amasentimitha / 60 mm
Ubukhulu 0.55 amayintshi / 13.9 mm
BlackBerry OS 5 / ukuhambisana BlackBerry OS 6
— 256 MB flash inkumbulo yangaphakathi
— 256 MB inkumbulo yangaphakathi
— microSD umthamo ikhadi 2GB kuhlanganisiwe
— a slot kuze kufinyelele 32GB for microSD memory card
Umthamo 1150 mah esikhiphekayo / lithium-ion battery
umbala ukubonisa 320x240 pixels
umbala TFT LCD
2.0 megapixel ikhamera, focus fixed (AF), video okuqoshiwe ukweseka
Mode Normal: 320 x 240 pixels
esakhelwe in ubuchwepheshe GPS nge support for A-GPS (GPS)
Standard 802.11b / g / n, isekela UMA standard
Bluetooth v2.1 module, mono / stereo-headset we-, ihendisfri, serial profile port, i-module kusekela lomsindo stereo Bluetooth Stereo (A2DP / AVCRP) kanye Profile Bluetooth SIM Ukufinyelela Profile
Usekela UMTS amanethiwekhi tri-band: (800/850) / 1900/2100 MHz noma 900/1700/2100 (hlola nge inethiwekhi yakho umhlinzeki)
Ukusekela isikwele amanethiwekhi: GSM / GPRS / EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
BlackBerry Ijika 3G: idatha bangaphandle Ukucaciswa
Uhlobo, ifomu factor futhi quality Yakha
Uma uthi nhlá, abaningi kungase kubonakale ukuthi lokhu smartphone libukeka nje BlackBerry Ijika 85xx. Nokho, lokhu kuyinto okuvelayo ezikhohlisayo wokuqala, eqinisweni, kubukeka more like the model original BlackBerry Ijika 8300. amadivaysi Awokufulema ochungechungeni 85hh flat and kancane streamlined, kuyilapho zokweseka imodeli BlackBerry Ijika 3G has a line ecacile futhi uyingqayizivele kusuka efonini.
Umbono wokuqala ukuthi uthole lapho wakhipha BlackBerry Ijika 3G aphume ebhokisini, lokhu akuyona smartphone 85hh chungechunge, kodwa kunalokho uchungechunge lwezinkulumo 83hh. Futhi akusiyo nganoma iyiphi indlela okuyiqiniso negative. Amadivayisi BlackBerry Ijika 83xx nokuthi Kunamandla ngokwanele ukubheka, kanti omusha BlackBerry Ijika 3G iphinde ivele njengoba enjalo, kanti Smartphones uchungechunge 85hh ukudala umuzwa wakhe wokuzizwa "cheapness" futhi "fragility". Omunye Uzwa ukuthi quality Yakha lwalolu hlobo liphakeme kakhulu kunezinye onobuhle owedlule. Lutho bazizwa nokuzethemba okwengeziwe emhlanganweni smartphone, kunokuba Smartphones 85hh chungechunge. Trackpad lisetudlwana, ezakhe izindima ziphakeme kakhulu, kuyilapho Smartphones 85xx chungechunge Kwakuthé lalihlehliswa singene izindlu. isikhala ibuye landiswa ukuze ihlanganise Call, key Menu, Emuva, futhi End, esihlinzeka umsebenzisi nge ukufinyelela kulula izinkinobho ezidingekayo.
— ikhibhodi design akuyona inkinga njalo ikhambi eliyingqayizivele. Njengoba ukukhululwa kwe BlackBerry Bold 9000, abasebenzisi abaningi bajwayele is klamo kwekhibhodi zayo eziningi kunanoma iyiphi enye amadivayisi ikhibhodi Ijika chungechunge. Ijika Keyboard 9300 model iyathinteka. Kungakhathaliseki novice noma Curve umsebenzisi abanolwazi - konke uyozizwa ekhululekile lapho esebenzelana nama-keyboard, kodwa labo are jwayele kuze ikhibhodi yohlobo njengasezulwini Bold Smartphones, bayoba lokuzivumelanisa elisetshenziswa njengoba okhiye wenze umsindo like the kuboniswe ngophawu of iwashi . Keyboard kancane kancane zigxilé ebiyelwe, okwenza kungabi zonke izinhlobo vibration uma besebenza naso. Ngaphezu kwalokho, it has an ukubukeka ekhangayo, ergonomic futhi icwecwe ngokwanele.
Ukuvivinywa Kokungathathi kudivayisi for impilo yebhethri abaphumelela, uma kuqhathaniswa nokungaphansi BlackBerry Torch, kunjani iphupho kuyagcwaliseka. With impilo yebhethri BlackBerry Torch 9800 futhi yakamuva OS 6 ngempela smooth ngakho njengoba singathanda, bese usebenzisa BlackBerry Ijika 3G waphinda sikhunjuzwa ngokuthi kungakanani ngempela udinga ukuphumula ukuze usebenze kahle ibhethri BlackBerry smartphone. Lapho eqhuba BlackBerry Ijika 3G, besebenzisa umthamo standard battery 1150 mah, kwathiwa babecabanga ukuthi bungakanani ubude bokuphila ibhethri zingancishiswa ngokusebenzisa 3G module, kodwa lokhu akwenzekanga. Le nkampani "RIM" wasebenza ngempela kanzima ukwakha 3G-module idivayisi — isibonelo esigqamile saleli.
Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe ukuthi ukuhlinzwa kwami ​​kuhambe BlackBerry Ijika 3G nge icala lapho usebenzisa i-Wi-Fi kanye GPS ulahlekile cishe usuku lonke. Uma ungawasebenzisi Wi-Fi kanye GPS, umsebenzi angathatha kufikela kuzinsuku ezingu-nenxenye, besebenzisa, kuleli cala, ie-mail lesicelo asebenzayo, Twitter kanye osheshayo Uhlelo zemiyalezo BlackBerry.
Ngiye wayevame isiphequluli, ngoba, eqinisweni, kwakukhona ukushayeka kaningi isiphequluli BlackBerry Torch, futhi ngangibuya ngiyingcuba kakhulu, kwadingeka ukuba uqale kabusha isiphequluli in OS 5 BlackBerry kaninginingi. Kodwa lapha, esikhathini lapho Ngangivame isiphequluli, cishe akunamthelela ukuphila kwebhetri.
Izinga service ngocingo kanye sixegisa (attenuation) of signal
Ukuhlola izinga namakholi angenayo naphumayo e BlackBerry Ijika 3G. Ngachitha testing Torch tinkhulumo, Bold 9700 futhi 8520. Kuzo zonke isibonelo sokuba signal amadivayisi izinga Bold 9700, ngokungangabazeki kunesithembiso indawo yokuqala, futhi 8520 - the last. Kunini 9300, afuna ukuyicela kimina? Ngingathanda wabeka le model ngaphambi 8520, kodwa hhayi ephakeme kuka Torch, ngaphawula ukuthi izinga useduze 9700. Ngo jikelele, izingcingo ibhalwe elizwakalayo futhi ngokucacile, kodwa ngezinye izikhathi wanika umsindo smartphone, elifana umphumela echo, kwakubonakala ukuthi the Dynamics fonit eziningana .
Izinga ikhamera bese camcorder
Uma ngikhuluma iqiniso, akukho lutho ephawulekayo. I smartphone ifakwe ngekhamera 2 megapixel, okuvela kulo awunakulindela okuningi. Kumele kuqashelwe ukuthi le smartphone basondele njengenye indlela ukuze akhombise isibhamu okungahleliwe izingane zakho noma abangane, kodwa kwezinye izimo - akuyona neze ukhetho best for esingathí sina photo-session. Isimo siyefana ne Isiqophi - smart phone kuhle abayitoho video okuqoshiwe, kodwa ungasebenzi naso ukuhlala wedding kothile, lokho ngoba isiqiniseko. Esikhathini sethu, lapho kukhona Amadivayisi nge 5-, 8- kanye 10-megaphikseli amakhamera, futhi akekho akucabangayo ukuthenga BlackBerry Ijika 3G kuphela ukuze bayisebenzise njengeqhinga ikhamera noma camcorder.
Amanye amadivayisi smartphone: Wi-Fi module, GPS, Bluetooth, izikhulumi, ukubonisa
Njengoba sazi ukuba khona module Wi-Fi, GPS kanye Bluetooth, smartphone BlackBerry Ijika 3G angabhekwa idivayisi kahle. Wi-Fi module in the smartphone ubonisa eliphezulu, unikezwa ukuthi kusekela wireless standard 802.11 b / g / n. Futhi index «n» lapha, kusobala, iyona ebaluleke kunayoyonke, ngoba njengoba ngisho BlackBerry Bold 9700 ifakwe nabo, ogama ebukhoneni Kuhlelwe nokuba kule imodeli elilandelayo BlackBerry Bold 9780. Nakuba for ezinye khona kwale module akayona imbangela eyinhloko ye ukuthenga smartphone, ngoba abanye — Kunalokho, lokhu module kubaluleke kakhulu. Kunoma yikuphi, isebenta ngempela eliphezulu.
Ngokuphathelene module GPS BlackBerry Ijika 3G, ukusebenza yayo kuyafana kwamanye onobuhle BlackBerry emakethe, it usebenza ngokushesha futhi uthola indawo yakho ngokunembile. Nakuba ukusetshenziswa njalo module GPS kuholela osenyameni kwesikhathi ibhethri.
akukho imibono olulodwa izinga kanye nokusebenza isikhulumi. Smartphone BlackBerry Bold 9000 yayiyindlela the best maqondana nalokhu (hhayi lo kuphela). Le nkampani "RIM" akakadali enye idivayisi okuyinto phela bekungaba ngcono ukuthola smartphone Bold 9000. Izikhulumi BlackBerry Ijika 3G akusho ukuya ngokuqinile nanoma ikuphi ukuqhathaniswa hhayi nge zwi iLoudspeakers Bold ngokwanele 9000. Kushisa bhé kule ndawo ngesikhathi udaba futhi uhlobo "crunched" umsindo lapho Nokho ukulalela umculo, headphones kulungile.
Nokho Ukusebenzisa smartphone yakho kwimodi hands-free, ezingeni, kodwa ngokushesha nje lapho ufuna ukubukela ibhayisikobho noma ulalele umculo, uzophawula ukuthi izikhulumi musa ngempela sibhekane ngokuphumelelayo lo msebenzi tidzingidvwe ngalokwanele.
Izinga isikrini — kulokho "RIM" inkampani bekungeke kudingeke ukuba ugcine. okufushane umnyuziki nqampuna umhlabeleli 320x240 isibonisi Smartphones ezahlukene BlackBerry Ijika 8900 North American inhlangano. Bonisa BlackBerry Ijika 3G, ngokuba impela umxhwele, akusho ukukhiqiza zonke umbono ofanayo efanele. indawo screen Awusizo kanye nokuntuleka nesinqumo zingavumi kakhulu. Nakuba, uma ungeyena ichithekile-resolution screen kwamanye amadivaysi, wena cishe akunakwenzeka ukuba ulethe ngokuphazamiseka.
BlackBerry Ijika 3G — & Accessories
Amalungu BlackBerry Ijika 3G ngeke usakubona ukuntuleka lokuzikhethela izesekeli for smartphone yakho. Iqiniso lokuthi leli smartphone siyefana kakhulu BlackBerry Ijika 8520, ukhuluma esivuna lokuthi iningi izesekeli izesekeli ezifana ncimishí 8520. Akukona nje kuphela isivikelo ofanele futhi kwezinye izimo, kusukela endaweni isiqeshana sokuhambisa iminwe kanye ikhibhodi ishintshile.
Isiphetho. Isinqumo BlackBerry 9300 Ijika 3G
Ekuphetheni, kufanele kuphawulwe ukuthi lokhu kuhluke smartphone eziphansi kanye kuhloswe ngokuyinhloko amalungu amasha BlackBerry. Noma ubani ohamba emhlabeni wonke, nakanjani kube wusizo kakhulu. Ngisho Mike Lazaridis wathi lokhu enkulumweni yakhe:
"Njalo umsebenzisi emakethe ifoni ephathekayo emhlabeni wonke kuyoke kudingeke uthenge smartphone yabo yokuqala, futhi loko BlackBerry Ijika 3G yakhiwe ngendlela yokuthi ukusiza abaningi ukuba uthathe leso sinyathelo sokuqala emhlabeni Smartphones".
Akekho uthi BlackBerry Ijika 3G — lokhu model entsha iyona BlackBerry best. Lokhu, ngaphezu kwakho konke, omunye ezingabizi kakhulu Smartphones BlackBerry. Le nkampani "RIM" Wayazi kahle-hle ukuthi wenzani maqondana kule divayisi. Uchungechunge BlackBerry Ijika ongakabi ngasekelwa 3G-ubuchwepheshe, futhi abaningi ngeke agxile eqinisweni lokuthi imodeli entsha 8530 linemojula 3G, kodwa akusho lutho. Akukho womhlaba wonke CDMA ukusabalala, GSM standard emhlabeni wonke waqaphela, ngaleyo ndlela, 3G module lwenteke BlackBerry Ijika 3G GSM standard. Uma udinga okuthile ngekhadi okungcono ukubonisa, ikhamera ngisho ngezisusa 'nensimbi', smartphone BlackBerry Ijika 3G — hhayi ukhetho best kuwe. Ngakolunye uhlangothi, BlackBerry Ijika 3G ungumuntu ephelele lezo abasebenzisi ongathanda ukuzama ergonomic, ezingabizi, smartphone agcwele ne 3G zokucabanga. Laba basebenzisi — lena engahle nezithameli okuyiwona empeleni, lo smartphone wakhululwa. BlackBerry Ijika 3G uyabonakalisa omuhle idatha yangaphandle, futhi design and, ngesikhathi esifanayo, nekuhambisana Smartphones isiko BlackBerry ngaphandle kwezinkinga ezingadingekile-add, okuyinto leli qembu abasebenzisi, futhi Cishe akudingeki uqale.